Zicinga ntoni iintlanzi? Iprojekthi yomzekeliso | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Zicinga ntoni iintlanzi? Ngumbuzo oqheleke kakhulu ukuba bambalwa kuthi abazibuze wona, kodwa… ziyakucinga ntoni ngenene iintlanzi? Ngaba baya kuba neengcinga zethu ezifanayo? le mibuzo iphendulwe ngumculi / umyili u-Amaya Uscola
Ngaphandle kwamathandabuzo yiprojekthi enomdla evela kwizinto esizibiza ngokuba ziingcali "iiprojekthi zobuqu" koluvo lwakhe umzobi ugqibile ukwenza ifayile ye- Iprojekthi yomzekeliso omangalisayo. Ukuba uyawuthanda umzekeliso kunye nezinye iincwadi, awuyi kuphoswa yile projekthi.
Onke amagcisa anento enye efanayo, siyathanda ukwenza iiprojekthi ezizezazo zonke iintlobo ngesizathu sokugcwalisa ipotifoliyo xa ngokwenyani sidala kuba ngekhe siyeke ukukhupha zonke izimvo zethu, kwaye esi yayisisiqalo seprojekthi ebonisiweyo Izikhumbuzo zePez nguAmaya Uscola. Usuku njengayo nayiphi na enye yaqala ukuzoba iintlanzi kwaye ucinga malunga nokuba bayacinga okanye akunjalo, Ngokwakhe iintlanzi zineengcinga kunye neemood ezahlukeneyoNgokusekwe kule ngcinga, waqala ukongeza amashwamshwam kwiintlanzi zakhe ngeengcinga awayezicinga.
Ngenye imini umyalezo ufika umkhuthaza ukuba Umceli mngeni kwi Instagram yabazobi ekufanele ukuba zoba into yonke imihla, UAmaya uthatha isigqibo sokuzoba intlanzi yonke imihla kwincwadi yakhe yokubhalela. Yonke imihla Ndazoba ngosiba olulula umqhubi intlanzi eyahlukileyo, kwakungekho mfuneko yakwenza akukho luhlobo lomzobo wangaphambili kuba utsale nje nantoni na ethi qatha engqondweni. Ecaleni kwentlanzi nganye wongeza inkcazo emfutshane malunga neentlobo kunye ingcinga yohlobo ngalunye lweentlanzi.
Inkqubo yakhe yomsebenzi yaqala eLondon apho Ndithenga incwadana encinci emalunga ne-12 × 16 enamashiti amibala, kule simahla waqala ukuzoba yonke into eyayisenzeka kuye yonke imihla. Kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba umzobi Andisebenzisi ikhompyuter nangaliphi na ixesha Ukuchukumisa imizekeliso yakho, zonke zenziwe ngesandla.
Ngenye imini entlanganisweni babona incwadi yakhe yeentlanzi kwaye bagqiba ngaphandle kwamathandabuzo ukuba mayipapashwe, Babenomdla kakhulu ngeentlanzi zika-Amaya kangangokuba bagqiba zivelise incwadana ngokufanayo usebenzisa ifomathi efanayo, imibala efanayo yephepha kunye nemizobo yoqobo ngaphandle kokuphinda ubambe ikhompyuter.
Okwangoku incwadi inokuloba (ithengwe) kwi-intanethi kumaphepha ahlukeneyo omzobi. Ukuba ungathanda ukuba nephepha lokuloba iintlanzi ezandleni zakho, kuya kufuneka ufikelele koku web.
1 Ukunyusa okuhle
2 Sebenzisa iinethiwekhi ukukhuthaza umsebenzi wethu
ukuba khuthaza iprojekthi yokuhlela ividiyo yenziwe apho ikhangeleka ngathi incwadi yeza elunxwemeni lolwandle, inomdla kakhulu ukuqaqambisa ukubaluleka kwale vidiyo njengoko ibonisa ngokupheleleyo ubungakanani beprojekthi. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukwenza olu hlobo lwenyathelo kubonisa ixabiso elongeziweyo kokubini ukukhuthazwa kwemveliso kunye neprojekthi yobuqu, kuba ingumbono ophambili.
Ungabona kwakhona ividiyo encinci malunga nomboniso eyenzeka e-Barcelona apho imizobo yokuqala kunye nencwadi zaboniswa.
Sebenzisa iinethiwekhi ukukhuthaza umsebenzi wethu
Ukubamba umboniso kunika umdla bonke abo bazobi bafuna ukukhuthaza kwaye ufikelele kubaphulaphuli abaninzi, umbono olungileyo xa usenza i- ukubonakaliswa koluntu Izama ukuvela kulunye ulwazi oluphakathi, nokuba lushicilelwe okanye lwedijithali. Asimele silibale amandla eendaba ezentlalo kunye nokukwazi ukufikelela kubantu abaninzi, kuyacetyiswa kakhulu ukuthatha imifanekiso kunye iividiyo zakho ukuba nentengiso ethe ngqo kuyo yonke imiboniso esiyenzayo.
Veza esidlangalaleni umsebenzi wethu
Zama phuma kwindawo ethile yoluntu (eshicilelweyo okanye edijithali)
Rekhoda iividiyo Ngexesha lomboniso wokuba ne-imeyile ngqo
Kunika umdla ukubona ukuba kwenzeka njani umbono olula uba yinto enkulu kakhulu ukwazi ukuya naphi na, amandla omculi akanawo umda xa umbono ungena entlokweni yakhe. Yintoni eyayinencwadana enemifanekiso enemifanekiso Iprojekthi yobuqu eyahlukileyo. Amagcisa kunye nabenzi ngokubanzi, bahlala bekhumbula gcina iincwadi zakho zemizobo kunye nemibono kuba ngaxa lithile banokuphuma bequbha njengale ncwadi yeentlanzi.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngalo mzobi ungabona ezinye zenethiwekhi yakhe:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Zicinga ntoni iintlanzi? iprojekthi yomzekeliso
Uyenza njani i-trochoid ngokusebenzisa i-Photoshop?